टिप्पणी : बहिष्कृत सहिदको सम्झनामा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
टिप्पणी : बहिष्कृत सहिदको सम्झनामा
माघ १६, २०७६ उज्ज्वल प्रसाईं
काठमाडौँ — आजको स्वतन्त्रता हिजो गरिएका श्रम र संघर्षको प्रतिफल हो । अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रताका लागि हिजो कस्ता बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम र संघर्ष भए ? त्यसो गर्ने को– को थिए ?
इतिहासका पत्र उजागर गर्ने प्रयत्नमा लागेका अन्वेषकहरुले यस्ता प्रश्नलाई गम्भीर मान्छन् । यसैसँग जोडिएर आउने अर्को सवाल हो, सामूहिक जीवनलाई सहज एवं प्रगतीन्मूख बनाउन मान्छेले कस्ता त्याग गरे ?
समाज परिवर्तनका निम्ति उठाउनुपर्ने जोखिमको अन्दाज भएरै खतरा मोल्नेहरुले जीवन अर्पण गरे । ठूलो खतराको अन्दाज नगरी संघर्षमा होमिएका सयौंले जीवन आहुति दिए । त्यस्ता सबै मानिसलाई सम्मान गर्न, उनीहरुले गरेका संघर्ष, श्रम र त्यागप्रति संवेदनशील हुन र अहिले उपभोग गरेको स्वतन्त्रता सहजै प्राप्त भएको होइन भनेर बुझ्नका लागि सहिदको अवधारणा सृजना गरिएको हो । सहिदको सम्मान गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको पूजा–अर्चना गर्नु होइन, बरु विगतमा भएका समग्र संघर्षप्रति संवेदनशील हुनु हो ।
सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनहरुको समष्टिले नै लोकतन्त्र सम्भव तुल्याउने हो । आवधिक निर्वाचनजस्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिमा शक्तिको औपचारिक बाँडफाँड गर्ने जस्ता कार्यले मात्र सिंगो समाज लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । मूलतः सबै नागरिकले समताको अनुभूति गरेको एवं आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर इज्जतिलो ढंगले जीवनयापन गरेको अवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था निर्माणका लागि मान्छेले अद्यापि संघर्ष गरिरहेका छन् । जारी संघर्षप्रति संवेदनशील बन्नका लागि पनि सहिदको स्मरण आवश्यक हुन्छ ।
स्वतन्त्रता हनन गर्ने हरेक कोशिस विगतका ती श्रम र संघर्षलाई अवमूल्यन गर्ने र अपमान गर्ने प्रयत्न हुन् । सामूहिक जीवनलाई न्यायपूर्ण बनाउन बोल्ने, लेख्ने, विचार अभिव्यक्त गर्ने, श्रम र सृजना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । लामो संघर्षपश्चात हासिल भएको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याउने कसरत भईरहेको समयमा विगतका संघर्ष र त्यागको स्मरण गर्नु जरुरी छ । साथै, अब गर्नुपर्ने संघर्षका लागि तयार हुन पनि उत्तिकै आवश्यक ।
अहिले उठाउनै पर्ने अर्को एउटा महत्वपूर्ण सवाल छ । सहिदको स्मृतिमा गरिने अनेक अनुष्ठानले वरण गरेको मर्म र त्यहाँ व्यक्त हुने भाष्यमा संघर्ष र त्यागको समष्टि परावर्तित भएको छ वा छैन ? खास खास आन्दोलनका नामहरु, ती आन्दोलनसँग जोडिएका निश्चित अनुहारहरु एवं समाज परिवर्तनको कुनै एक वा दुई घुम्तीको मात्रै स्मरण गर्नुलाई कसरी बुझ्ने ?
वि.सं २००७ को क्रान्तिको महत्वलाई समेत नजरअन्दाज गर्ने वा त्यसको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रयत्न थालिएका बेला उक्त क्रान्तिको स्मरण जरुरी छ । तर, त्यसअघि र त्यसपछि भएका अनेक आन्दोलन, बलिदानी र त्यागको महत्ता स्मरण नगरी आजको लोकतन्त्रलाई समग्रतामा बुझ्न सकिँदैन । साथै, सहिदको पहिचानसँग जोडिएर आउने केही परिचित अनुहारको स्मरण गर्दैगर्दा अन्य सयौं मानिसले गरेका त्यागलाई सम्झने यत्न नगर्दा हाम्रो संवेदनशीलता कमजोर हुन्छ । साथै, सहिदको स्मरण गर्ने र त्यसका नाममा अनेक अनुष्ठान आयोजना गर्ने काम निरस औपचारिकतामा सिमित हुन्छ । वर्षेनी एकपटक एकै ढप ढाँचाका मान्छेले सधौ उस्तै सुनिने भाषण टिभी र रेडीयोमा सुनाएर मनाइने सहिद दिवसको कुनै अर्थ छैन ।
सहिद दिवसको औपचारिक निरसतालाई प्रश्न गर्ने हेतु सानो जमर्को गर्नु पनि प्रशंसनीय हुन्छ । सात सालदेखिका अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा लागेर जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने एउटा सामान्य प्रयत्नले पनि हाम्रो संवेदना झन्‍कृत तुल्याउन सक्दो रहेछ । विस्मृत सहिदको खोजी गर्न कोशिस गर्दा आममानिसले थाहा नपाएका वा थाहा पाएकाहरुको समेत विस्मृतिमा पुगिसकेका केही संघर्षशील योद्धाका कथा बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।
जहानीयाँ राणा शासनविरुद्ध भएका संघर्षको अगुवाई गर्ने नेता एवं जीवन आहुति दिने केही खास मानिसको स्मरण सहिद दिवसमा मात्रै गरिँदैन । आजभोली इतिहासबारे लामा आलेख प्रकाशन गर्नेले ती नामहरु सधैं स्मरण गरिरहेका हुन्छन् । तर, तुलाराम तामाङजस्ता संघर्षशील योद्धाको स्मरण गर्नेहरु कति होलान् ? राणाविरुद्ध सशत्र संघर्ष गर्ने जनमुक्ति सेनाबाट पहिलो सहिद हुने तुलारामको स्मृतिलाई आफ्नो मस्तिष्कमा अझै ताजा राखेका उनका सहयोद्धा श्यामकुमार तामाङको भनाई मर्मस्पर्शी छ । विगत ७० वर्षमा कसैले नसम्झेका तुलारामबारे एक्कासी आज आएर एक पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले ‘सपनामै छु कि जस्तो लाग्यो’ भनेका छन् ।
थारु समुदायले पहिलो महिला सहिदको रुपमा स्मरण गर्ने कोईली थारु खलिहान आन्दोलनमा मारिएकी संघर्षशील योद्धा थिइन् । तर कोइलीबारे जानकारी राख्ने मान्छे भेट्न अब हम्मे छ । उनले भोगेको जीन्दगी र गरेका संघर्षबारे कुनै गतिलो लिखत फेला पार्न उति नै मुस्किल छ । कोइली थारुहरुको संघर्षलाई फुटनोटसम्म पनि नबनाई गरिने सहिदको स्मरण होस् वा नेपाली समाजको गौरवशाली विगतको महिमागान, त्यो अपूर्ण हुन्छ । साथै, बहादुर सदा, किसन दुसाध र कृष्णवीर कामीहरुको योगदानबारे कुनै खोजबिन नहुनुले हाम्रो असंवेदनशीलता नै दर्शाउँछ ।
कुनै एक समयका शासक र तिनको शासनलाई वैध ठहर्‍याउन खटिएका बुद्धिजीविद्वारा रचित इतिहासका कथ्य सधैं दोहोर्‍याउनुको अर्थ हुँदैन । ती कथ्यमा सत्यका जलप हुनसक्छन्, ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा ती अध्ययनयोग्य पनि हुनसक्छन् । तर थप अध्ययन र खोजीको उपक्रमलाई निस्तेज तुल्याउने हदमा तीनको महिमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । बरु शक्ति र सत्ताले विस्मृतिमा धकेलेका वा बहिष्कृत तुल्याएका पात्रहरु र तिनले गरेका संघर्षका कथा उधिन्न सके नेपाली समाजको इतिहास समृद्ध हुनसक्छ । तुलाराम, कोइली र बहादुरहरुको कथाले हाम्रै गौरवशाली चित्र उजिल्याउँछ ।
सहिदका नाममा पुराना टेप पटकपटक बजाउनु र एउटै मुर्तीलाई हरेक वर्ष चिसो पानीले धोईरहनुले समग्र विगतको स्मरण गर्ने सिँगो प्रक्रियाकै मूल्यवेत्ता कमजोर तुल्याएको छ ।
कोइली र किसनहरुको छोटो चर्चाले नै पनि सहिद दिवसको निरस औपचारिकता भङ्ग गर्ने काम गरेको छ । यस्तै स–साना तर जरुरी कामले सहिदको सच्चा सम्मान हुन्छ, आफ्नै विगतको मनासिव स्मरण पनि ।
थारु महिलाको नलेखिएको इतिहास
सहिद बहादुर सदाको बहादुरी बिर्सेको मधेस
प्रकाशित : माघ १६, २०७६ १८:१३
माघ ३, २०७६ उज्ज्वल प्रसाईं
भारतका सहरहरू आन्दोलित छन्, आन्दोलनको नेतृत्वमा युवा छन् । दिल्लीको सहिनबाग होओस् वा कलकत्ताको पार्क सर्कस मैदान, आन्दोलनको नेतृत्व लिनेमा महिलाको संख्या अधिक छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) एकसाथ कार्यान्वयन भए असंख्य मानिस अनागरिक ठहरिने सम्भावना छ ।
त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी भारतीयहरू यी ऐन र व्यवस्थाको खारेजी चाहन्छन् । कश्मीरको मुद्दाले जारी आन्दोलनको उपादेयता वृद्धि गरेको छ । मानवशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईका शब्दमा, स्वतन्त्रता आन्दोलनपछिको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलन हो ।
आन्दोलनमा सहभागी युवाले सम्भवत: सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको शब्द ‘संविधान’ हो । संविधान निर्माता भनेर चिनिने भीम राव अम्बेडकरको फोटोलाई उनीहरूले आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनाएका छन् । सरकारको हिंसात्मक मनोदशामाथि व्यंग्य गर्न उनीहरूले गान्धीलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानेका छन् । सात दशकअघि जारी गरिएको संविधानका मर्मलाई उनीहरूले आफ्नो तागत बनाएका छन् । आन्दोलनको भरपर्दो जग पनि संविधान नै भएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले संविधानको अपमान गरेको उनीहरूले आम नागरिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छन् । भारतको विविधतालाई अनदेखा गरिरहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले वरण गरेको हिन्दुत्ववादको असलियत उजागर गर्न संविधान नै बोकेर हिँडेका छन् । हिन्दुत्ववादी विचारधाराले लोकतान्त्रिक संविधानमाथि कसरी प्रहार गर्छ, सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मुस्लिम, दलित, महिला, आदिवासी र निमुखाको अधिकार सुनिश्चित नगर्नु संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो भनेर युवा विद्यार्थीहरू संविधानको दीर्घायुका लागि सडकमा आएका छन् ।
भारत सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका माओवादीबाहेक अरू कसैले संविधानको खारेजी चाहेका छैनन् । कश्मीरको समस्यालाई हल गर्नसमेत भारतको संविधानलाई ठूलो अवरोध मानिएको थिएन । बरु संविधानले अंगीकार गरेको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कश्मीरले स्वायत्तता अनुभूति गर्न पाउँथ्यो भन्ने धेरै आलोचकको मत थियो । मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै कश्मीरले समातेको आशाको नाजुक कडी खुस्काइदिए । संविधानका पानामा केवल भरोसाका लागि राखिएको स्वायत्तता सम्बन्धी धारा खारेज गरेर उनले सीमान्तीकृत क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न चुनौती दिए । परिणाम कश्मीरले भोग्यो, संविधानको घात साधन बन्यो ।
भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी एवं सीमान्तीकृत क्षेत्रले राज्यबाट कहिल्यै न्यानोपन महसुस गर्न सकेनन् । मनमोहन सिंह र अटलबिहारी वाजपेयी जस्ता भलादमी शासकले समेत उनीहरूका मुख्य चासो र मागलाई सधैं अनदेखा गर्न चाहे । कश्मीरको सवाल होओस् वा गोर्खाल्यान्डको मागमा गोलबद्ध भएका नेपालीभाषीको मुद्दा, राज्यले उनीहरूलाई ठूलो भरोसा दिन सकेको छैन । आश्वासन बाँडेर मत लिई सत्ताको हिस्सेदार बन्नेहरूले समेत सधैं धोका नै दिए । सदैव पराईको व्यवहार सहेका यस्ता समुदायले समेत संविधानलाई भने आफ्नो आड मानेका थिए । संविधानको मर्म अनुसार नै उनीहरूले राज्यबाट आफ्नोपनको अपेक्षा गरेका थिए । राज्यसँगको संघर्षमा पनि उनीहरूले संविधानलाई आफ्नो मुख्य औजार माने ।
संविधानले समयको कठोर परीक्षाको सामना गर्दै र आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै गएका कारण असंख्य समस्याका बावजुद सिंगो मुलुकका रूपमा भारत अडिएको छ । जटिल विविधतालाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेकैले यो सम्भव भएको हो । त्यही संविधान अन्तर्गतका व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर आएको भाजपा सरकारले संविधानको मर्म बिर्सन खोजेकामा चिन्तित युवा आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहलाई भनेका छन्— भाजपाको फासीवादी चरित्र भारतको संविधानसुहाउँदो छैन । युवा नेतृत्वको आन्दोलन सफल हुन सहज छैन, संघर्षका रूप फेरिन सक्छन्, तर असम्भव छैन ।
मोदी–उन्मादको झल्को नेपाली शासकमा पनि देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको रवैयामा मोदी र शाहको अहंकार अब सबैसामु उदांगो हुँदै गएको छ । केही समय पहिलेदेखि नै ओली विचारधारामा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको औंल्याउँदा ‘नकारात्मक’ भएको बताउनेहरूले समेत त्यसमा समस्या देख्न थालेका छन् । सञ्चार क्षेत्र र सम्पादकलाई समेत औंल्याएर बोलेपछि आएका प्रतिक्रिया हेर्दा अहिले आएर झसंग भएको जस्तो भान भएको छ । सूचना प्रविधि लगायत विधेयकमा समस्या आउनु व्यक्ति ओली र बाँस्कोटाको मात्र समस्या होइन, बरु संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै उनीहरूले वरण गरेको विचारधाराको समस्या हो भनेर बुझ्न अझै केही समय लाग्न सक्छ ।
यसअघि पास भएका एवं विभिन्न मन्त्रालयमा तयार हुँदै गरेका ऐनहरूमा संविधान निर्माणकै बेलादेखि लागू गरिएको ओली डक्ट्रिनको प्रतिच्छाया परेको हो । विधेयकमार्फत खुल्दै आउने सो डक्ट्रिनको असलियतविरुद्ध ढिलोचाँडो नेपाली युवा पनि आन्दोलित हुन सक्छन् । नेपाली आन्दोलनको त्यो दृश्य भारतको भन्दा भिन्न हुने सम्भावना प्रचुर छ । कारण, भारतीय युवामा जस्तो नेपाली युवामा संविधानप्रतिको अपनत्व छैन । ठ्याक्कै संख्या त तोक्न सकिँदैन, तर सामान्य अन्दाजले भन्छ— जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान जारी भएकै बेलादेखि यसलाई आफ्नो मान्न नसकेको हो ।
निर्वाचनमा मत खसाउन गएका युवाको संख्या मात्रले संविधानप्रतिको अपनत्व बताउन सक्दैन । संविधानका प्रावधानको मर्म बुझिसक्दा कुनै पनि नेपाली महिलाले यसलाई आफ्नो मान्न सक्दैनन् । नागरिकता प्रावधानको बचाउमा अघि सारिएको राष्ट्रवादको भाष्यले महिलाको थप अपमान गरेको छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने संविधानलाई कसरी आफ्नो मान्ने ? अनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको थाहा पाउने पुरुषले संविधानलाई कसरी स्विकार्ने ? संविधान जारी हुँदा मधेसले गरेको ब्ल्याक आउटको अर्थ छ भनेर बुझ्ने हो भने, संविधानको कच्चा धरातल त्योभन्दा राम्ररी कहाँ देखिएला ? संविधान ड्राफ्ट हुँदै गर्दा दलित अभियन्ताले काठमाडौंका सडकमा टाउका फुटाएका हुन्, त्यो समुदायले यो संविधानलाई सकार्न सकेका छैनन् ।
भोलि धनगढी र जनकपुरमा, काठमाडौं र विराटनगरमा, फिदिम र थवाङमा ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ का विरुद्धमा आन्दोलित युवाले यही संविधानको संरक्षणको माग गर्लान् ? दिल्लीको सहिनबाग र कलकत्ताको सर्कस पार्कमा जसरी महिलाको नेतृत्वमा शासकलाई संविधानको मर्म बुझाउने र्‍याली आयोजना गरिएको छ, के नेपाली महिला पनि सडकमा यही संविधान शिरमा राखेर निस्कन सक्छन् ? संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको भए, नेपाली लोकतन्त्रमा आइपर्ने खतरालाई जोगाउन त्यही संविधान बलियो आधार बन्ने थियो । त्यसो भए आन्दोलनको आधार के हुने ? संविधानकै खारेजी ?
आज प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीबाट उत्तेजित भएर लेख र निबन्ध लेखिरहेकाहरूले संविधानको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्, धेरै पहिलेदेखि मुखर रहेको ओली विचारधारालाई समयमा पहिचान गर्न सकेनन् । एक थान संविधानका नाममा मुलुकलाई वर्षौं बन्धक बनाउन सकिँदैन थियो भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्ने हतारोमा व्यक्त भएको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई परख गर्न नसक्नु कमजोरी थियो । त्यो कमजोरी होइन भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
त्यस्ता कमजोरी सच्याउने ठाउँ थिएन भन्ने होइन । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संविधानको अपनत्व बढाउन घचघच्याउन सकिन्थ्यो । सुरुका दिनदेखि संविधानका सबल पक्षमा जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट हुँदै आएका प्रहारको पोल खोल्न सकिन्थ्यो । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका मर्ममा गरिएका निमर्म प्रहारविरुद्ध ‘सम्पादकको मुटु काण्ड’ ले जत्तिकै सचेत हस्तक्षेपको माग गर्थ्यो । विकास र राष्ट्रवादका कथ्यमा लुकेका लोकतन्त्रद्वेषी चरित्रको उजागर गर्न यस्तै सक्रियताको खाँचो थियो । त्यस्तो सक्रियताले संविधानको अपनत्व बढ्थ्यो र त्यसको आयु वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो । तरंगित हुन सधैं ‘मुटु–ठट्टा’ को पर्खाइमा बसिरहनुपर्दैन, संविधान नै सम्झिरहे काफी हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०२